Aluminium CNC yekugaya zvikamu
Aluminium CNC Turning Zvikamu
EDM machine Zvishongedzo
Carbon Simbi CNC machine
Stainless Simbi CNC machine
Aluminium Alloy Die Kukanda
Zingi chiwanikwa Die Kukanda
Jekiseni Moulds Zvikamu
Stamping Parts Zvakanakira Sezvo kudhinda kugadzira kunowanzoitwa mukamuri tembiricha, inonzi zvakare kutonhora kutonhora. Tsikwa yekuumba ndeimwe yesimbi kumanikidza kugadzirisa nzira. Icho chinhu chinogadzira huinjiniya tekinoroji inoenderana nesimbi yeplastiki deformation dzidziso. Izvo zvakasvibirira zvekutsika kugadzira zvinowanzo kuve jira kana tambo, saka inonzi zvakare sheet sheet stamping. (1) Iyo yakatarwa kurongeka kwekutsika zvikamu inovimbiswa neforoma, uye ine yakafanana ...
Somunhu aitungamirira epurasitiki jekiseni muforoma China mugadziri, isu unyanzvi mukugadzira siyana epurasitiki jekiseni anoumba kuti motokari, musha midziyo yemagetsi, midziyo yezvokurapa, zvemagetsi uye zvemitambo michina, uyewo zvavo maindasitiri OEM zvikumbiro. Kambani yedu inovhara nzvimbo inopfuura 3 800 mativi emamita workshop, yakakomberedzwa nekutakurwa kwakanaka Parizvino, boka redu rinosvika kune vanopfuura zana nemakumi mashanu ekugadzira maturusi muChina uye zviwanikwa zvemari zvinopfuura mamirioni gumi nemashanu eRMB. Kukwanisa kwedu ndiko ...
Kufa uchikanda Chii kufa-kurasa? Kumanikidzwa kukanda kunonzi kufa kukanda Kufa-kukanda nzira umo yakanyungudutswa chiwanikwa mvura inodururwa mukamanikidzwa kamuri, mhango yesimbi muforoma inozadzwa nekumhanya, uye chiwanikwa mvura inosimbiswa pasi pekumanikidzwa kuti iite kukanda. Kubatsira nekusagadzikana kwekufa uchikanda: Chakanakira: yakanaka mhando yepamusoro yekugadzira kugona mutengo wakanaka Kukanganisa: zvinhu zvakaganhurirwa chete aruminiyamu zinc magnesium lead lead tini inogona kushandiswa kukanda kusvika parizvino. Expe ...
Zvigadzirwa zvakagadziriswa zvinogamuchirwa. OEM / ODM mirairo inogamuchirwa. Isu tiri speciale muzvibereko zvinoenderana nevatengi vedu 'specimen kana prints. Ndapota taura nesu zvakasununguka seshamwari yakanaka kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu nebasa. Tsika dzakakwirira dzakarongeka kufa dzichikanda zvikamu Mould kugadzirira uye kugadzira Type Imwe mhango / muti-mhango yezvikamu zvakafanana / mhango yemhuri 2-3 yakatsiva muforoma yekuchinjana zvinhu SKD61, H13, Dievar, QDN, 8407, 2234V, TQ1, 2343, 45 # Simbi , nezvimwewo divi Chibvumirano ...
Diki Kodhi CNC Lathe Muchina Kutendeuka Kudhirowa Yakakwira Kuchengetedza Spare Zvikamu Chigadzirwa Chigadzirwa Diki Kodhi CNC Lathe Muchina Kutendeuka Kudhirowa Yakakwira Zvakaringana Spare Zvikamu Chinhu chesimbi isina simbi, aruminiyamu, ndarira, simbi, ndarira, mapurasitiki, nezvimwe Kurapa kwepamusoro anodizing, pad-kudhinda, electroplating, kupenda. , jecha nenyunje, girazi-makorari, nezvimwe Chitupa ISO9001, SGS, TS16949, ROHS Maitiro ekushanduka, kukuya, kuchera, kukuya, kupukuta uye zvichingodaro; Bhizinesi chiyero cnc machine, kukanda, iye ...
Precision CNC machining simbi dzesimbi Zvidimbu: Chigadzirwa Chigadzirwa: Dongguan Tsika Precision Isina Simbi Mhangura CNC Turning Zvigadzirwa: simbi isina simbi, aruminiyamu, ndarira, simbi, mhangura, mapurasitiki, nezvimwewo Kurapa kwepamusoro: anodizing, pad-kudhinda, electroplating, kupenda, girazi. -polishing, nezvimwe Chitupa: ISO9001, SGS, TS16949 Maitiro: kutendeuka, kugadzira, kuchera, kukuya, kupukuta uye zvichingodaro; Bhizinesi chiyero: CNC machining, plastiki prototyping, plastiki kuumba Dhirivhari: 7-15 mazuva mushure ...
Cnc machine zvikamu zvinowanzo shandiswa kumabasa anoda imwe-offs kune akawanda mazana ezvikamu. Kubva kupurasitiki kuenda kusimbi, kubva yakaderera-huwandu kusvika kune yakawanda kugadzirwa kwezvinodiwa kana seye imwechete yekuvhara kubatana pakati pesisitimu dhizaini uye izere kugadzirwa, pamwe neiyo imwe pre-kugadzirwa odha mune yakasarudzika huwandu Feature Zvinhu kabhoni simbi, alloy simbi, mhangura, simbi isina simbi, nezvimwe . Kukura M2-M36.Customized maererano nekudhirowa kwako. Services OEM, dhizaini, yakagadziriswa Surface kurapwa Passivation ...
EDM Machining zvikamu Iyo hwaro EDM maitiro ari nyore kwazvo inova magetsi emagetsi inogadzirwa pakati pesimba remagetsi nechero magetsi magetsi, inowanzo shanda kune mamwe akaomarara makiyi mapoinzi, epurasitiki mafomu, undercut uye diki nzvimbo, nezvimwe, zvivakwa zvedu kugona kwema workpieces anosvika pamasendimita gumi nematanhatu pakukora, uye taper angles kusvika 30+ degrees, Tinogona kubata zvikamu zvinosvika 25.6 "x 16" x 17.75 ″ ekushandira. Yedu yakanaka waya yekucheka inogona kuburitsa maumbirwo echokwadi nemakona pasi kune .001 ”WI ...
CNC Turning Zvikamu: Yedu CNC lathes inogonesa yakakwira kumhanya uye mhando yepamusoro kutendeuka kwemaviri epurasitiki nesimbi. Maitiro ekushandura anotendera akaomarara ekunze mageometri uye mabhure emukati kugadzirwa. Yedu yekutendeuka inokwanisa kune imwe-offs kuburikidza ne batch kugadzirwa kwezvinhu zvako. Zvakare tendeuka-yekugaya makemikari muchina nechishandiso shongwe ine yepamusoro hunyanzvi. Chakanakira chijana-hwokugaya hwakabvira muchina (1) kupfupisa chigadzirwa mukugadzira muitiro cheni uye kuvandudza kugadzirwa kunyatsoshanda. Tur ...
Nei uchisarudza isu: 1.We tiri fekitori ine anopfuura makore makumi maviri cnc machine ruzivo. 2.Approx 95% yechigadzirwa chedu chakatumirwa zvakananga kuUSA / Canada / Australia / UK / France / Germany / Bulgaria / Poland / Italia / Netherlands… Hunhu hwakasimbiswa. 3.Mazhinji emachina edu akatengwa kubva kuUSA neJapan senge nemuchina HAAS (3-axis, 4-asxis cnc milling michina), Hama, TSUGAMI (6-axis kutendeuka muchina), Miyano zvichingodaro. saka isu tinokwanisa kugadzira yakakwira chaiyo zvikamu zvinoenderana neyako shiviriro zvido. 4 ....